अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन: साेसल मिडियामा ट्रम्प कि बाइडेनअगाडी ? | News Portal from USA in Nepali
अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचन: साेसल मिडियामा ट्रम्प कि बाइडेनअगाडी ?
अमेरिका– अमेरिकामा आउँदो नोभेम्बर महिनामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुदैछ ।
यही चुनावी दौडमा यतिबेला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उनका प्रतिस्पर्धी जाे बिडेन चुनावी अभियानमा लागेका छन् । अमेरिकामा पछिल्लो क्रममा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण चुनावीसभा गरेर भीड जुटाउन भने संभव छैन ।
यसका लागी दुवै जना समर्थकहरुलाई आफनो पक्षमा जुटाउन सामाजिक संजाल उनिहरुका लागी एउटा महत्वपुर्ण भुमिका रहेको छ । दुवै जनाले सोसियल मिडियाबाट आफनो चुनावी अभियान चलाइरहेका छन् ।
सोसियल मिडियामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प केही अगाडी देखिएका छन् ।
फेसबुकमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी प्रचार अभियानको अकाउन्टमा २ करोड ८० लाख भन्दा बढी ले फलो गरेका छन् । उनले औसतमा प्रत्येक दिन १४ पोष्ट भन्दा बढी गर्छन् । प्रतिस्पर्धी मानिएका बिडेनको चुनानी अभियानको अकाउन्टमा २० लाखले फलो गरेका छन् । उनले ट्रम्पको तुलनामा कम अर्थात दैनिक ७ पोष्ट गर्ने गरेका छन् । अन्य सोसियल मिडियामा पनि दुवैको यस्तै आ“कडा देखिन्छ । ट्वीटरमा ट्रम्पको ८ करोड २४ लाख फलोअर्स छन् । उता बिडेनको ६ करोड ४ लाख फलोअर्स छन् । ट्रम्पले फलोअर्स बनाउन निकै मिहिनेत गरेका छन् । उनि दैनिक धेरै ट्वीटहरु गर्ने गरेका छन् । ट्रम्प गुगल र युटयुब विज्ञापनमा पनि बिडेन भन्दा ३.१ अनुपातले अगाडी छन् ।
सोसियल मिडियामा ट्रम्पको धेरै समर्थक हुनेले उनलाई निर्वाचनमा धेरै फाइदा हुन सक्ने अन्तराष्ट्रिय समाचार एजेन्सी एपीले विश्लेषण गरेको छ । उता बिडेन र उनका समर्थक पनि सोसियल मिडियामा आफनो प्रभाव देखाउन कसरत गरिरहेका छन् ।
समाचार स्रोतका अनुसार जुन महिनामा फेसबुक विज्ञापनमा बिडेनले ट्रम्पे भन्दा बढी पैसा खर्चेका छन् । बिडेनले इन्स्ट्राग्राम तथा टिकटकमा समेत आफनो समर्थन जुटाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।